Ny LG V30 dia azo jerena mampiseho efijery fanesorana faharoa | Vaovao momba ny gadget
Ny LG V30 dia azo jerena mampiseho efijery fanesorana faharoa
Taorian'ny fanombohan'ny tsena ny LG G6, Ny orinasa Koreana Tatsimo dia efa namarana ny pitsopitsony momba ny LG V30, izay ho lohandohany manaraka hitsena ny tsena, na dia hahalala azy amin'ny fomba ofisialy aza dia tsy maintsy miandry ny fahavaratry isika. Mazava ho azy, misaotra indray ireo tsikombakomba Evleaks fa efa hitantsika sahady ny mety ho endrika farany famolavolana ity finday ity, izay atahoran'ny maro amintsika fa hanetsika ny tsenan'ny smartphone.
Ary ity terminal vaovao ity dia afaka mametraka efijery roa, tahaka ny hitantsika tamin'ny fitaovana teo aloha an'ity fianakaviana manokana ity. Mazava ho azy, amin'ity indray mitoraka ity dia ho lehibe kokoa ny efijery faharoa ary mety hikorisa koa hanana efijery lehibe lehibe kokoa.
Raha mijery ireo sary tafaporitsaka ianao, Ity LG V30 vaovao ity dia mampatsiahy antsika betsaka ny BlackBerry Priv, izay nanafina ny kitendry ara-batana ao ambadiky ny efijery ary nipoitra niaraka tamin'ny swipe fotsiny. Amin'ity indray mitoraka ity dia ho efijery faharoa hikorisa izy.
Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra ny fampiasana an'ity efijery an'ny LG V30 ity, ary raha mamela antsika hanana sary masina ao aminy ny kinova taloha ary manana ny hitsin-dàlana vitsivitsy, ny habe lehibe kokoa ananan'ny efijery an'ny terminal vaovao ny manana dia mety hiteraka fampiasana vaovao sy mahaliana. Ny iray amin'izy ireo dia mety ho ilay mety hivezivezy fitendry virtoaly izay tsy handrakotra ny ampahany amin'ilay efijery.
Fantatray fa tena tianao ity LG V30 ity, saingy tsy maintsy miandry isika ankehitriny ary araka ny efa noresahinay teo aloha dia tsy hatolotra amin'ny fomba ofisialy raha tsy amin'ny fararano manaraka, amin'ny andro mbola tsy nambara.
Ahoana ny hevitrao momba ny famolavolana ny LG V30 vaovao?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny LG V30 dia azo jerena mampiseho efijery fanesorana faharoa
Electro Altamira dia hoy izy:
Raha ny marina, rehefa namaky izahay dia nampahatsiahy anay ilay BlackBerry Priv iny ihany.
Fomba tsara ihany koa.
Mamaly an'i Electro Altamira
Ny Vertu Signature Cobra, misy emeraoda 2 sy diamondra, dia $ 360.000
Antenna sela ... avo roa heny ny fandrakofan'ny iPhone-nao? Eny amin-kitsimpo [REVIEW]